Ku wajahan gumeysiga Shiinaha ee Afrika iyo Kaaribiyanka? Ka dib ganacsiga saddex geesoodka ah ee caanka ah ee ka dhanka ah addoonsiga gadaal ka noqday, gumeystihii reer Yurub, neocolonialism-kii reer Galbeedka, waxay u noqon laheyd inuu Shiinaha u weecdo gumeysiga Afrika iyo Caribbean-ka… (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: May 20, 2020 05: 00 No Comments
Horumarka Shiinaha ee Afrika iyo Karibiyanku wuxuu ku sii socdaa si heer sare ah. Su'aalaha qaarkood waxay mudan yihiin miisaankooda dahab ahaan ujeedkan: muxuu Shiineeysku u duulayaan sp ... Akhri wax dheeraad ah
Shiinaha ayaa ku dhawaaqay inay kordhineyso joogitaankeeda militari ee Afrika: Shiinaha ma leeyahay qorshe Afrika?
Posted By: KongoLisolowaa: May 20, 2020 03: 35 No Comments
Ilaa iyo bartamihii 1990-meeyadii, tusayaal badan ayaa tusayay kororka awooda Shiinaha ee qaaradda Afrika. In ka yar shan sano, bulshada Shiinaha ee Afrika waxay ... Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: May 16, 2020 00: 20 No Comments
Dooddu way furan tahay! Tani waa waxa ay Yuhuuddu si cad ugu sheegaan Kitaabka Quduuska ah (Yooxanaa 8:33): "In aysan weligood u ahaan addoommo qofna": Yooxanaa 8:22, "Yuhuuddu waxay ka yiraahdeen ... Akhri wax dheeraad ah
Ma necbahay ilaahyada masiixiyiinta? Tani waa waxa asxaabta Masiixiyiinta qaar ay igu eedeeyaan si joogto ah: Hoogay, waxaa jira kuwa neceb waxa aan jirin "Marka anigu ma necbahay ilaah keliya oo ah saddex jeer mid"
Posted By: KongoLisolowaa: May 14, 2020 06: 06 No Comments
Laakiin iyada oo la siinayo inta jeer ee la iweydiiyo su’aasha, waa inaan jawaab ka bixiyaa - Dareemidu wax macno ah ma leh, waad dhihi kartaa. Haa, waad saxantahay, laakiin ... Akhri wax dheeraad ah